ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းအချို့ -
ယခုလိုတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းအလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အမြဲလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရပြီး အားလပ်ချိန်ရဖို့ ရန်အလွန်ပင် ခက်ခဲပါတယ်။ အလုပ်တွေပဲဖိလုပ်နေတာမျိုး၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတဲ့ လူတွေဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာကြီးကို ပဲကြည့်ပြီးလုပ်နေဒါမျိုးတွေဟာ ကြာလာရင် စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရခဲလှတဲ့မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်း နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာဝါသနာအလိုက်သင်တန်းတွေတက်ခြင်းဟာဗဟုသုတရဖို့ရန်မက ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အနာဂတ်မှာလုပ်မဲ့အလုပ်အတွက်လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်း အရည်အသွေးတွေကို မြှင့်တင်ရာလည်းရောက်ပြီး မသိသေးတဲ့အရာတွေကို လည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆို ပန်းချီသင်တန်း၊ ကြက်ခြေနီသင်တန်း၊ မုန့်ဖုတ်သင်တန်း၊ အကသင်တန်း စတာမျိုးတွေတက်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်ကို အကျိုး ရှိရှိအသုံးချရာလည်းရောက်ပါတယ်။
အပင်စိုက်ခြင်းဟာလဲသင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ မိမိစိတ်ကို တည်ငြိမ်မှု ရစေရုံသာမက စိတ်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့သီးပင်စား ပင်တွေနဲ့မိသားစုကိုကျွေးမွေးလို့ ရပါသေးတယ်။ သီးပင်စားပင်တင်မဟုတ်ပါဘူး ပန်းပင်နဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေလဲစိုက်လို့ရပါသေးတယ်။
ဟင်းချက်တာကိုအိမ်မှုကိစ္စအနေနဲ့သဘောမထားပဲဝါသနာအရချက်ကြည့်ပါ။ ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကို ယူပြီးဟင်းချက်နည်းတွေကိုစမ်းချက်ကြည့်ပါ။ ဟင်းချက်နည်းအသစ်တွေစမ်းပြီးချက်ကြည့်ခြင်းဟာလဲ မိမိရဲ့ အားလပ်ချိန်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ရုံမက ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတဲ့ အလေ့အကျင့်ကိုရစေပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာတော့ ဟင်းချက်နည်း Video အမျိုးမျိုးကို Online ကနေလဲလေ့လာလို့ရနေပါပြီ။
မိမိအလုပ်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပြီးမိမိမသင်ယူရသေးတဲ့ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရစေရုံသာမက မိမိမသိသေးသော နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုပါသိရှိရပြီး ဗဟုသုတ လဲရစေပါတယ်။ မိမိသင်နေတဲ့ဘာစာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ စာအုပ် စတာတွေကိုပါလေ့လာ နိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
Posted by Min Thuta/ ဩဂုတ် 21, 2018/ Blog/0Comment
Website မှာအမြဲ Track လုပ်သင့်တဲ့ User Behaviour
Email Marketing ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရနိုင်လဲ?
2020 အကောင်းဆုံး Private Browser များ
Content Marketing နဲ့ Content Strategy တူညီပါသလား?